Taliban oo heshay diyaaradaha dagaalka Afghanistan, maxay ku sameyn karaan? | Xaysimo
Home War Taliban oo heshay diyaaradaha dagaalka Afghanistan, maxay ku sameyn karaan?
Taliban oo heshay diyaaradaha dagaalka Afghanistan, maxay ku sameyn karaan?
Sawirrada iyo muuqaalladu waxay muujinayaan Mi-17, MD 530F, helikobtarrada UH-60 iyo diyaardada xamuulka ee yar C-208.
Qoraalka sawirka,Diyaaradda fudud ee MD-530 muddo dheer hawada laguma heyn karo iyadoo sidan qalab dheeraad ah
Lix iyo tobankii August, wargeyska Uzbek Gazeta.uz, oo soo xiganaya waaxda warbaahinta ee Xafiiska Dacwad-oogaha Guud, ayaa ku warramay in 22 diyaaradaha militariga ah iyo 24 kuwa helikobtarka ah oo laga leeyahay Afghanistan ay dalkaasi u duuleen August 14 iyo 15. Waxaa saarnaa 585 ka tirsan ciidamada Afghanistan.
Qoraalka sawirka,UH-60 Black Hawk ayaa Afghanistan looga adeegsan jiray siyaabo kala duwan, oo ay ku jirto qaaditaanka dhaawaca
Waxaa intaas dheer, waxay heysteen helikobtarrada Mi-8, diyaaradaha xamuulka iyo kuwa tababarka ee L-39.
Qoraalka sawirka,Nin aan la garaneyn oo ku hor sawiran MiG-21
Ilya Kramnik wuxuu sidoo kale aaminsna yahay in Uzbekistan aysan diyaaradaha u celin doonin Taliban, balse si shaac ah uma sameyn doonaan, ee dalalka Galbeedka iyo Ruushka ayay kala kaashan doonaan qalabka diyaaradaha.